Qalisa i-Samsung Galaxy S (GT-i9000), ene-2.3.3 Isinki yesonka | I-Androidsis
Incopho | | Ingcambu Android, Samsung, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Oko salipapasha inqaku kunye Indlela yokukhanyisa i-2.3.3 ye-Gingerbread ROM (ikhowudi ye-XXJVK) ye-GT-i9000, baninzi baye babuza malunga nendlela yokufumana Ukufikelela kwengcambu Ngale nguqulo.
Kule nqaku siza kuyibonisa inyathelo ngenyathelo.
Ngaphambi kokuba siqale, kuya kufuneka sikhuphele ikernel Ingcambu (patched for root access) kwi eli khonkco: CF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.zip. Ngokunyanisekileyo kwabafana kwi-XDA-Developers.
Le kernel isisiseko yeyokuqala iingcambu, isisiseko. Inkqubo ye- IKernel CF-Ingcambu Kuthathwe ngqo kwi-firmware yasekuqaleni ye-Samsung, apho kuphela Ukufikelela kwengcambu, iBusibox, ukubuyiswa okungakhuselekanga kunye nokuhambelana neClockWorkMode. Igcina iifayile ze- Ukuhambelana okuphezulu kunye ne-Samsung firmware yoqobo ye-GT-i9000, i-XXJVK.
Ukuba into oyifunayo ikernel elungiselelwe nge-lagfix kunye neminye imisebenzi, kusafuneka ulinde kancinci ukuze uzinze.
LE ASIYOROM (Ukufakela i-ROM 2.3.3 ye-Gingerbread compilation XXJVK ye-Samsung Galaxy S jonga isifundo sangaphambili). Oku yintsimbi nje. Ke ngoko, ngaphambi kokufaka le kernel, kuya kufuneka ufake iROM epheleleyo ngendlela esele ibonisiwe kweso sifundo. Kule kernel ineepateni awuzukufuna ukuyisula (ukuseta kwakhona).
Ndiza kuyiphinda kwakhona, kwaye andizukudinwa, nangona okwangoku, kufanele ukuba sele ukhanyisile iROM kwaye ngaphambi koko, wenze iitshekhi ezifanelekileyo:
- IBATTERI KUFUNEKA ITSHAYISWE NGOKUPHELELE
-QINISEKISA UKUBA IINKCUKACHA ZOKUSEBENZA ZISEBENZA KWIXESHA LAKHO UKUNGENA KWIMODE ETHI KHUTSHELWEYO (Ekhaya + kuMandla + kwiVolumu esezantsi).
Landela le miyalelo ingezantsi kweleta kwaye ungachukumisi naliphi na elinye iqhosha okanye ukhangele nayiphi na enye ibhokisi ngaphandle kwale ibonisiweyo:
-Vula ifayile kwi-CF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.zip. Uya kufumana i- Ifayile yeCF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.
- Cima iselfowuni kwi-PC yakho (i-USB).
-Vula ifayile ye- Inkqubo yeODIN (Kuya kufuneka sele unayo xa ukhanyise iROM epheleleyo, ndisebenzise inguqulelo 1.7).
Cofa kwi iqhosha elibizwa «PDA», kwaye ukhethe ifayile ICF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.tar, esisiphumo sokukhupha i-zip.
-Vula iselfowuni yakho Imowudi yokukhuphela.
- I-Conecta iselfowuni kwi-PC yakho ngentambo ye-microUSB.
- Qiniseka ukuba Ibhokisi ethi "Ukwahlula kwakhona" ayihloliswanga. Nokuba yintoni oyivileyo phaya, SUKUJONGE le bhokisi. Akudingeki ukuba usasaze.
Cinezela ngoku Iqhosha lika "Odin" lokuqala likaOdin.
- Lindela ifayile ye ukuqala kwakhona kweselfowuni. Sukuchukumisa enye into. Kwimizuzwana engama-30 kufuneka iqale ukuqala.
- Yiyo leyo, unayo Ingcambu ye-Android 2.3.3 ye-Gingerbread kwi-Samsung Galaxy S GT-i9000 yakho!
ISILUMKISO: Akusoloko kusebenza okokuqala, ungalahli ithemba. Ke kuya kufuneka uyiphinde le nkqubo de kube isiphelo sikwazi ukuyilayisha I-kernel eneengcambu. Isebenzile kum kwitrayi yesine. 😉
Uya kuba nayo ngokuchanekileyo I-ROM XXJVK ene-Root access, ngaphandle kwe-lagfix, okanye ezinye izinto ezongeziweyo ezinjengeVoodoo zihlala zizisa.
KUBALULEKILE !!: Ngaphambi kokudanyaza iROM okanye iKernel, la manqaku alandelayo kufuneka athathelwe ingqalelo
-Yenza ugcino lweeNkqubo kunye nedatha ngeTitanium Backup.
-Yenza ikopi yogcino lwencwadi eneenkcukacha «/ efs». Ngomhloli weengcambu okanye Emulator Terminal
-Jonga ukuba iNdlela yokuKhuphela kunye neMowudi yoBuyiselo isebenza kunye neqhosha "lasekhaya + laMandla + leVolyum".
Khumbula: Konke oku uya kukwenza ngokuzibeka emngciphekweni. Ukuba awuqinisekanga, kungcono ungayenzi kwaye ulinde uhlaziyo olusemthethweni ukuba lufike ngeKies Samung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Qalisa i-Samsung Galaxy S (GT-i9000), ene-2.3.3 yeGingerbread
Izimvo ezi-72, shiya ezakho
Ukuba kukho umntu owaziyo ngesifundo sokuncothula i-Nexus One nge-Gingerbread (2.3.3) ungaludlulisa ikhonkco nceda! Kudala ndikhangela enye kangangeeveki ezininzi kodwa andiyifumani
Indawo efanelekileyo yokubuza kwakho yiforamu yethu yeNexus One.
Intloko phaya kwaye uthumele umbuzo wakho.
UMHLOBO KUFUNEKA NDINGENISE INKQUBO YOKUSEBENZA KWI-I9000 PQ KANYE NENDLELA NE-LEDI SEKUFUNEKE UKUSUSA INGXAKI NOKUBA UMFANEKISO UQHUBILE KUNYE NESIKHUNDLA KUPHELA ISIMEMO NGOKU KUNXIBELELANA NOKULANDELA OKULANDELAYO KANYE NAKHO I-PC KODWA YENZA UNGENZI NANYE INTO EBHALA NGOMBUZO NDINGAYENZA I-EMAIL YAM gavi82@live.com
Ukufikelela kwengcambu ye-Hahaha akucothanga ukuphuma… .. Ulunge kakhulu, yigcine
umnini mhlaba sitsho
Umbuzo omnye, ukuba ufuna ukususa iNgcambu, uyazi ukuba yintoni iKernel emele ukuyifaka?
Phendula kumgcini mhlaba
Ewe iyafana kanye neROM entsha. Khumbula? Ufakelo lweROM 2.3.3 entsha sakhanyisa iifayile ezi-3:
Ewe, ukwenza inkqubo yokubuyela umva yokususa ingcambu. Kuya kufuneka ulandele le nkqubo inye kodwa nge-original -PDA ifayile evela kwiROM: PDA_XXJVK.tar.md5
Kungenxa yoko le nto ndiyithanda le ndlela, kuba inokubuyela umva ngokupheleleyo.
Ewe, yile nto bendiyicinga. Kodwa ukuba ndibeka i-PDA esele ndiyibekile kuyo, ingaphulukana nomcimbi wezicelo? Ndiyitsho kuba ityebile kakhulu ukuba ndikhumbula kakuhle. Okanye ukuba ndibeka ngaphandle kokumakisha kwakhona ukwahlulahlula, akukho nto inokwenzeka?
Ngapha koko, ndinendawo yogcino yogcino lwam kunye nenye eneTitanium, kodwa kukwazi ngaphezu kwayo nantoni na.
Ndine-gingerbread evela kwi-movistar 2.3.3, ndingayingcambu ngale ndlela ukuba ngaphezulu? Ngaba ndiphulukana nayo nayiphi na into endinayo kwiselfowuni efakiweyo?
Uxolo ngokuthumela kabini, kodwa kuphakame omnye umbuzo. Ngaba unayo iGlass S? Ngaba ukhe wazama ukubeka lagfix ngolu hlobo? Ukuba kunjalo, yeyiphi?
Kukuba bendijonge iVoodoo kodwa abakayibeki nantoni na engaphaya kweFroyo kwaye, ungasoloko utsala i-OCLF, kodwa ke, ukuba unayo nayiphi na enye ingcebiso, kungcono kunokuba ngcono. Nangona ndinyanzelekile ukuba nditsho ukuba le ROM ilunge ngakumbi kum kuneFroyo yangaphambili nge-OCLF; ngaphandle kokufumana amanqaku amancinci kwiKota yesiBini.
Kungcono sisebenzise iqonga lemibuzo, amathandabuzo, ... ukuze nabanye banike izimvo kumava abo.
Isifundo esikhulu seAndroisis, iGalaxy S ilunge kakhulu ukuyenza Ingcambu iyachukumisa kakhulu, khange ndibenangxaki ngayo, nokuba iBhetri yimbali, nantsi ividiyo yam ineGlass S ebaleka i-2.3.3 kwaye ineNgcambu, imibuliso evela Guwatamela
Njengoko besele ndikuxelele amaxesha amaninzi. Siyazithanda iividiyo zakho.
Imibuliso kunye nemibulelo evela eSpain !!
Ukufezekiswa okugqibeleleyo okokuqala !!! Yeyiphi i-weno sq tb esenza ujikeleziso lwesikrini ... ndiyigxile ngaphambili ngenye indlela kwaye ayisebenzi xro okwangoku yonke into isebenza ok.
Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela kakhulu !!!
Ndingajonga njani ukuba ndiyingcambu? Ngaba umntu othile angandixelela ngokufutshane ukuba yintoni injongo yokuba yingcambu? Konke okugqibelele
Intloko kwiiforamu zethu kwaye ufunde oku, iyakucacisa ezinye iikhonsepthi.
Ukuba usenamathandabuzo emva koko, ungawathumela apho.
Enkosi kwi-Trimax, ndiya kuyenza. Konke okugqibelele
Mholweni. Andikwazi ukufumana i-odin yokulayisha ifayile okanye andiyiboni. Ndingayenza njani?
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ngaba le miyalelo isebenza kwimodeli ye-GT-I9000 ngohlobo lwe-baseband I9000BVJJPH, ndiyifakile iFroyo 2.2.1 nge-superuser kunye neVodoo lagfix.
Imibuzo embalwa, ngaba iyimfuneko ukuvula i-galaxy ngaphambi kokwenza nantoni na?
Ndazi njani ukuba iqhosha elidibeneyo liyasebenza?
Ndisandula ukuphucula i-kies ukuya kwi-gingerbread. Ukubuyisela ikopi yetitanium kufuneka ndiyincothule. Ndiyilandele le ndlela kwaye xa ndiza kuqala yonke into ok, iskena semidiya siqala kwaye ngesiquphe isikrini siyacima kwaye ufumana ilogo ye-movistar kwaye uqalise kwakhona, ngolu hlobo luphindaphindiweyo… Ndenza ntoni ????
Kwenzeka into efanayo kum njengoPepe, ndihlaziye ii-kies kwi-gingerbread, ibikukuyenza le ndlela kwaye ndiyidlulisele kum. Andazi ukuba ndenzeni ndizamile ukubuyisa ukusuka kumzi mveliso kwaye ayisebenzi.
Okwangoku ayisebenzi emva kokubuyiselwa kwefektri kunye nayo yonke imo yokususa imowudi Hayi indlela elibi ngayo ixesha endandinalo!
Ekugqibeleni ndiyikhuphele iFroyo kwaye ndayifaka nge-odin, ngale ndlela ndiyisebenzisile kwakhona, emva koko ndalanda i-gingerbread kunye nefayile yengcambu kwelinye iphepha kwaye yonke into isebenza kakuhle. Ndishiya ikhonkco kwimeko apho inokukunceda: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=188562
Enkosi kakhulu, ndiza kuzama ukukuxelela
Ngaphandle kwamathandabuzo uPepe, emva kokubeka iFroyo kunye neOdin, uyibeke njani iGingerbread, neOdin okanye neKies? Ukusuka kwikhonkco ondithumele kulo kubonakala ngathi sele uyigqithile iMovistar, akunjalo?
Xa ndifake iFroyo, ii-kies azisalwamkeli uhlaziyo lwe-Gingerbread, ke ndiyenzile kunye ne-Odin ngokungabuyeli umva kwaye ndiqale ngeengxaki ezifanayo ...
Ekugqibeleni into endiyenzileyo ndibeke ingxelo esemthethweni ye-Eclair ngu-Odin, emva koko ndayihlaziya i-Froyo ngo-Kies, e-Froyo ndafaka i-Titanium yogcino kwaye kwangoko emva koko ndahlaziya i-Gingerbread nge-kies igosa lase-Movistar, yandinika intonga encinci malunga newaranti kunye nezinto. Inyani yile yokuba xa undixelele ukuba uyilungisile, undinike uxolo lweengqondo. Ndiyabulela kakhulu, loluphi uloyiko esidlule kulo.
Ndiyavuya uyilungisile nawe.
Ungoyiki ukuba kwenzekile kuwe njengam noPepe unesisombululo. Into ekufuneka uyenzile kukubeka i-rom ye-Odin, kulula kakhulu kodwa kuya kufuneka ufunde ngononophelo nasiphi na isifundo esikwiindawo ezininzi, le ndiyibekayo ibonakala ilula kum
http://www.samsunggalaxys.es/viewtopic.php?f=50&t=984, Apha ndibeka ikhonkco kwiirom
Le nguqulo ye-rom yayiyeyona ndiyisebenzisileyo
Inguqulelo esemthethweni movistar eclair:
Uyazola ukuba ulungisiwe, funda le tutorial okanye enye oyifumana ngononophelo, jonga ngaphambi kokuba ungene kwimowudi yokukhuphela, ucime iselfowuni (susa ibhetri) kwaye ucofe amaqhosha ngaxeshanye: ivolumu ezantsi, embindini iqhosha kunye namandla (cinezela ngcono ezimbini zokuqala kuqala kwaye emva koko). Ukuba ufumana imowudi yokukhuphela awuyi kuba nengxaki. Tyhila
Ndizakuzama, kukuba bendisoyika kakhulu, kufuneka ndithethe into ibenye, ndiyenzile ibhetri ivuliwe
cinemax, unayo i-msn? ke ungandinceda ngcono, bff kukuba ndikwimeko embi 🙁
Umthala wam ubuyisela yonke i-2 ngo-3 nangona ndiyicimileyo, ndimtsha kule nto kwaye ndiyoyika kakhulu, ungandinceda
Uxolo, ndiyasebenza kwaye andikwazi ngoku ukuba uyafuna ngale mvakwemini ndingakunceda ngcono, ndikuxelele ngebhetri kuba andikwazi kuyicima nangayiphi na enye indlela, kodwa ukuba ungayicima ungayisusanga ibhetri, akukho ngxaki, iyafana. Kuya kufuneka uqale ngebhetri, ukuba akunjalo. Ndixelele ukuba ufuna i-msn yakho kwaye ngale mva kwemini ndiza kukunceda.
kulungile, msn wam: ivan_dj96@hotmail.com uzakuba liliphi ixesha kwi-intanethi? Enye into, ukubuyela kwakhona akusasebenzi kum 🙁 Thixo ndifuna ukufa ...
Ngo-6: XNUMX ndizakudibanisa, jonga ukuba ndingakunika na isandla. Sukuba nexhala malunga nokufumana kwakhona, amaqhosha ayanzima ngamanye amaxesha, ukuba ikhe yakusebenzela ngaphambili, iya kuqhubeka ikusebenzela.
kulungile cinemax, ukubuyela umva kuyahamba, iya kuba yile nto uyithethayo xa ifuna, ndiyathemba ukuba inokulungiswa, ndinayo ukusukela ngoLwesihlanu odlulileyo 🙁
Ndingayifumana njani i-gingebread 2.3 kwisamsung yam yokufaka .. Ngaba umntu unokundinceda?
yonke into ilungile! beka elinye igumbi le-ODIN kunye ne-voila, ukuba kwenzeka omnye umntu, uyazi! 😀
kwaye ndilifumana phi igumbi le-samsung lokufaka? ukuba uyandinceda ..
yiya kwiforum ye-htcmania http://www.htcmania.com/portal.php jonga phaya! 😀
Ndiyabulela kakhulu, ngesifundo, ndingumqali kwaye ndikwazile ukuyenza ngokwam. Ungaboni ukuba ndonwabe njani ngoku hahaha, nangona i-newbie ndiyithanda ukungcungcuthekisa ngefowuni yam ehluphekileyo, kwaye mna wayezama iiveki kwaye ekugqibeleni kunjalo !!!! kwaye ngaphantsi komzuzu. Enkosi kakhulu !!!!
Ndinenguqulo yeGingerbread 2.3.3 (Vodafone) kwaye xa ndenza onke amanyathelo ifowuni iqala kwakhona nge-2 ngo-3… andinayo indlela yokuyimisa ngaphandle kokuba ndiyicime… Ndiphelelwe lithemba…
Molo, ndinengxaki efanayo, inye kuphela into eyahlukileyo kukuba isuka eMovistar. Ukuba ukwazile ukuyisombulula, ndingavuya kakhulu ukuba ungandixelela ukuba ukwenze njani.
Rom by odin kwaye oku akoyiki ukuyikhuphela kwiforum ethile
Enkosi uIvan, bendisele ndiyifumene ngokujonga macala onke, nangaphezulu ngeengcambu ezibalekayo ... ukuba ndinexesha ndizakubeka njengoko ndenzile, enkosi!
Kwenzeka ntoni mhlobo, okokuqala enkosi ngesifundo…. Ewe, bendifuna ukukubuza ukuba le kernel isebenza kumnyele wam we-4g nge-2.3
Molo, okokuqala enkosi ngenxa yezi zinto usebenza nzima :).
Ndinengxaki emva kokulandela onke amanyathelo kwaye loo nto iselfowuni iyajika ngaphandle kwengxaki kude kube lapho kakuhle, kodwa emva kwethutyana iyenza ibonakale ngathi uphawu lwevodafone luyavela kodwa lujike njalo ngalo lonke ixesha. unayo ukuba ungandinika isandla. Enkosi
Puff enkosi kakhulu ukuba ubunzima undisusile lol. Umbuliso
Fumana i-rom yeforum kwaye uyibeke ngenkqubo ye-odin. Emva koko phinda amanyathelo kwesi sifundo kwakhona. Kukho isifundo sendlela yokubeka igumbi nge-odin.
Ungakhathazeki kwaye ngethamsanqa, kwenzeka into efanayo kum.
Ngendlela, ekuqaleni kweli phepha unekhonkco ebendithetha ngalo.
isifundo esihle kakhulu sitsho
Ndizenzile izifundo ezimbini kwi-sgs gt-i9000 yam kwaye yayigqibelele !!!!!
Phendula kwisifundo esigqwesileyo
Ndizamile ngeSuperOneClick kunye ne-z4root, kodwa azisebenzi, le ndlela isebenze ngokumangalisayo.
Ndiyirhoxisile ingxelo yam.
Nangona ekuqaleni bekubonakala ngathi kuhamba kakuhle, iselfowuni yam ibivalwe njengabanye abaphawula ngasentla.
Ndiyibuyisele kwakhona i-Gingerbread kwaye ngoku isebenza kakuhle, ndiza kubona ukuba ukwenza oko bakuthethayo kumagqabantshintshi ndiyifumana.
molo kufanelekile ukuyisiphula neengcambu kuba i-galaxi yam iza ne-2.3.3 Isonka sejinja ndifuna kuphela ifayile yokuqala nge-odin kwaye kunjalo? ayizukundivumela ukuba ndenze ikopi yogcino kunye ne-titaniun indixelela ukuba kufuneka ndiyigxile.
Ndibeka into ethethwa yi-galaxi GT I9000 yam:
Inguqulelo yeFirmware 2.3.3
Inani lesonka sejinja lokwakha
UOscar Hernandez sitsho
Kwimeko yam i-Samsung Galaxy GT-i9000T yam yeza neFirmware Version 2.3.3 kunye nenombolo yokwakha iGINGERBREAD.UBJV6.
Ndingayisebenzisa le kernel inye bayikhomba kwisifundo okanye ngaba inokwenza enye into?
Phendula uOscar Hernandez
Ukugqwesa, isebenze okokuqala kwi-samsung galaxy S gt-i9000 nge-gingerbread 2.3.3
Ilula kwaye kumanyathelo ama-3 ...
Molo uncedo lwam luvela kwifektri (orenji) uhlobo lwenombolo ye-firmware engu-2.3.3 yenombolo yokuhlanganiswa kweGingerbread.BVJV8 ayinamsebenzi ukuba ihlala isitsho njengoko iposti isitsho ngeROM XXJVK ngokufikelela kuMthombo kufuneka ndisebenzise ifayile enye «CF-Root-XX_OXA_JVK -v2.7-CWM3RFS.zip »okanye enye.
UJuan Mendez sitsho
Molo Goodnight !!! Uncedo, le firmware izakusebenzela i-Galaxy s 4g kwi-T Mobile? kwaye enye bayakuyazi ngesicelo esihle sokuyikhulula kwaye bayisebenzise ngokuzolileyo neMovistar Venezuela !!!!
Ngaphambili ndiyabulela kakhulu !!! 🙂 themendez@hotmail.com
Phendula uJuan Mendez
Ola ndizama ukwenza oku ndiyifakile i-Android 2.3.3 jvk ndenza ifayile ndicime iselfowuni yam. Ndivula i-odin ndilayishe idatha kwi-PDA ndivula iselfowuni yam kwimowudi yokwehlisa, i-amdroid iphuma nayo umhlakulo kodwa ayenzi enye into ekufuneka ndiyenzile kuba ndicofa iselfowuni kwi-pc xa i-android ikho. ngomhlakulo ndiyawuqala kwaye akukho nto yenzekayo
molo ndiyenzile into ethethwa yiposti ukuyincothula kwaye ngoku iyajika kwaye icime rhoqo.
Ndiyathetha, iscreen sokuqala osibonayo siza kuvula iselfowuni kwaye icime njalo njalo. aer ukuba ungandinceda ndiyishiye ngoluhlobo?
Kwenzeka into efanayo nakum, ukuba usifumene isisombululo ndingavuya kakhulu ukuba ungandixelela into oyenzileyo.
molo ami, kwenzeke into efanayo nakum, wenze ntoni, enkosi
NguYesu Rojas sitsho
Andifundanga ngakumbi kodwa ndifumana oku kuhlekisayo:
«KUBALULEKILE !!: Phambi kokuba ukhanyise iROM okanye iKernel, la manqaku alandelayo kufuneka athathelwe ingqalelo:
Yenza ikopi Eyogcino kwifolda "/ efs". Nge-Root Explorer okanye yesiphelo sendlela »
Uzikopa njani ii-efs ukuba ifowuni ayikazinzi? Oo 😛
Phendula Jesús Rojas
Uqeqesho luka-Oscar sitsho
Kule odin ufumana i-eyelash etyheli kwaye ukongezwa kuyavela kwiwindow yomyalezo?
I-Master Icpr sitsho
Uhlaziyo sele luphume nge-KIES, sendiyenzile ukusuka kwi-Enclair ukuya kwi-Gingerbread 2.3.3 kwaye imodeli yam yiGPS S GT I900T esuka eClaro Puerto Rico.
Phendula kwi-Master Icpr
UDaniel Fernandez Ramirez sitsho
Molo, ndimtsha koku, ndiyisusele i-SGSII yam kwaye isebenza kakuhle, kuphela ukuba iyandibonisa ngokuvula ibhokisi etyheli. Asiyongxaki leyo; Inqaku kukuba ngoku xa ndiyilayita ihlala ijikeleza kwaye into eyenzayo ukuyicima nokucima
Phendula kuDaniel Fernández Ramírez
Ikhonkco le-kernel liphantsi okanye aliveli
Wow okokugqibela abafana, yonke into isebenza ngokugqibeleleyo okokuqala, akukho ngxaki ukulandela amanyathelo njengoko kuchaziwe, umsebenzi omkhulu, ndiyavuyisana.
Umhlobo 2 sitsho
Molweni .. emva kokuyifaka ndilahlekelwe yi-3g .. ndiyibuyisa njani?
I-Android iya kuba nesabelo sentengiso se-45% ngo-2016, ngokokufunda
UGoogle uqalise ngenkonzo yokuqokelela ngaphakathi nohlelo